Jawaari: Gacanta dowladda hallagu soo celiyo furaha taleefoonnada Soomaaliya ee 252 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Afhayeenka Golaha Barlamaanka Sooamaliya, Maxmed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka hadlay kulan-howleed uu la yeeshay wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta ayaa golaha xukuumada ka dalbaday iney gacanta dowlada dib ugu soo celiyaan furaha Tafeefoonnada dalka ee aha 252, oo ah hanti qaranka Soomaaliyeed leeyahay.
“Lambarka furaha Soomaaliya loo yaqaano 252 wa inuu gacanteena kusoo noqoto, ha noqoto 2 bil, ha noqoto 5 bil, waa in hadda la bilaabaa, howshiisa hadii ay socoto in la sii dadajiyo” ayuu Jawaari.
“Milkiiliyasha shirkada laftigooda waxaan aaminsan ahay iney yihiin dad aqoon leh, muslimiin ah, ku leh xaq qof kasta waa inuu bixiyaa waxa xaqa loogu leeyahay, haddii ay rabaan iney hantidoodu u barakowdo waxa aan ka raadineyno aan leenahay iska bixiya, canshuurtaasi kalmada canshuur Af-Soomaali waa dhaqan-dhowrto, haddi la bixiyo dhaqan dhowrtadaasi la bixiyo xoolahooda xalaal iyo barako ayuu u yelanayaa”, sidaa waxaa yiri Prof. Jawaari.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha golaha baarlamaanka fedaralka Soomaaliya, Maxmad Sheekh Cismaan Jawaari ayaa soo u soo jeeydiyay golaha fulinta ee xukuumada Soomaaliya in ay wacyi gilin joogta ah u sameeyaan milkiilayasha shirkadda si ay canshuurta u bixiyaan.